Vono olona feno habibiana - Nokendaina sy nalentika tany anaty rano izy mianaka
Nivadika biby mihitsy ny olona sasany ankehitriny. Ny alahadin'ny pentekosta lasa teo tokony tamin'ny 7 ora maraina, dia nahatazana sakaosy natsingevan'ny ranon'Ivondro ireo mponina tao amin'ny fokontany Mahasoa Kaominina Amboakarivo Toamasina II. Niditra an-tsehatra nisintona ilay sakaosy nampanantonina sisin-drano ny fokonolona. Rehefa nosavaina ny tao anatiny, dia fatin'olona roa mianaka. Iray olon-dehibe, ny iray zaza. Nampandre ny zandary tao Tanandava avy hatrany ny fokonolona. Tonga teny an-toerana ny zandary avy ao Tanandava niaraka amin'ny mpitsabo nijery ifotony ny zava-misy. Rehefa natao ny fizahana, dia vehivavy 27 taona bevohovoka 7 volana sy zazavavy kely sahabo 2 taona ireto hita faty ireto…
Sambava - Ankizivavy 12 taona naolan’ny raibeny
Nametraka fitoriana teny anivon’ny Polisim-pirenena tao Sambava ny ray aman-drenin’ilay ankizivavy vao 12 taona rehefa fantatra fa fanolanana no tsy mahasalamana azy. Efa fantatry ny fianakavian’io zaza io ny nahavanon-doza satria rehefa nanontaniana izy dia namosaka ny marina. Voalaza fa rahalahin’ny talen-tsekoly ianaran’ilay zaza ihany no nanolana azy io. Herinandro taorian’ny tranga vao noentin’ny fianakaviany namonjy dokotera ity farany ka rehefa nanao fijerena ny mpitsabo dia hita fa namoaka rano ny fivaviany, izay midika izany fa simba. Mpitsabo roa samy hafa no nitondrana azy ary mitovy ny valin’ny fizahana.
Vaky trano tany Antsiranana - Teratany afrikanina iray voatafika, maty novonoin'ireo jiolahy ny mpiambina
Amin'ny ankapobeny dia akaiky fety no tena mirongatra ny resaka vaky trano aty Antsiranana. Mifanohitra amin'izany ny zava-misy raha ny tranga niseho nisesy tafara tato izay no asian-teny. Araka ny fantatra dia saika ho isan'andro no ahenoana trangana vaky trano aty Antsiranana. Ao anatin'ireny fokontany manodidina ny tampon-tanàna no tena mirongatra izany. Tahaka ny ao Mahatsara, Tsaramandroso, Ambalavola, Mahavokatra, izay toerana azo sokajiana ho faritra mena raha ny aty Antsiranana manokana no resahina.
Fianarantsoa - Mitokona ny mpianatra, mitaky ny hanohanana ny tolona eto Antananarivo
Ao anatin’ity toe-draharaham-pirenena mafampana ity hatrany dia efa nahenoana akony sahady ny avy any Fianarantsoa renivohitry ny foko Betsileo noho ny fikomian’ireo mponina. Manaporofo izany ny fanoheran’ireo mpianatra tao amin’ny Lisea Raherivelo Ramamonjy teny Anjoma tsy hanohy ny fianarany intsony. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana dia nanomboka tamin’ny alatsinainy hariva teo no nandeha ny resabe sy ny feo tetsy sy teroa fa vonona ny hitolona ho an’ny Firenena ihany koa ny vahoakan’ny Fianarantsoa.
Sakoroka tao Mananara-Avaratra - Olona dimy maty, karohina i Romule
Publié le dimanche, 22 avril 2018
Mbola mafampana ny toe-draharaha any Mananara- Avaratra. Nitrangana sakoroka ny tany an-toerana ny andron’ny sabotsy 21 avrily. Vono olona niseho tao amin’ny Kaominina Antananagnivo no nitarika sakoroka namoizana ain’olona maromaro. Antananagnivo izay 20 km eo ho eo raha avy ao Mananara-Avaratra tampon-tanàna. Lehilahy iray antsoina hoe Romule mpandraharaha ara-toekarena no namono nahafaty ny mpiasany iray izay nampangainy ho nangalatra ny volany 1 000 000 Ar. Ny marainan’ny sabotsy 21 avrily no nataony io famonoana io. Vokany, tsy nahafaly ny havan’ilay lehilahy sy ny fokonolona io famonoana tamin’ny fomba feno habibiana nataon’i Romule io, ka nirohotra hisambotra azy.
Fanafiana moto tao Mangarano-Toamasina - Telo mianaka voaendaka, voan'ny sabatra ny mason'ilay zaza
Lasa faritra mena amin'izao fotoana ny eo amin'ny lalam-baovao mampitohy ny Plaque Relax amin'ny lapan'ny prefektiora Mangarano. Eo anelanelan'ny sekoly Les Prosper sy ny lapan'ny Prefektiora no tena ialokalofan'ireo olon-dratsy. Ny zoma 13 avrily lasa teo tokony ho tamin'ny 8 ora alina, telo mianaka nandeha moto no nosakanana jiolahy miisa 7. Niezaka nanohitra ilay raim-pianakaviana ka norarafaran'ireo jiolahy vely sabatra ny tanany sady nivantana tany amin'ilay zanany lahy kely teny ambony moto ilay sabatra.
Mahajanga - Mpianatry ny sekoly Fjkm, maty nananton-tena
Nihoron-koditra ny fianakaviana sy ny olon-drehetra raha nandre fa hita nihantona tamin'ny tady, tany amin'ny sekoly fianarany ny vatana mangatsiakan'ny tovolahy iray 23 taona, ny talata 17 avrily lasa teo. Tokony ho tamin'ny valo ora alina tany ho any no hitan'ny olona sendra nandalo ka teo amin'ny kianja filalaovana basketin'ny Sekoly Fjkm, Ziona Vaovao Mahajanga no nahatazanana azy. Avy hatrany dia nifamory ny rehetra ka nizaha ny zava-nitranga. Rehefa nandeha ny fanadihadiana dia mpianatra ao amin'ny lisea tsy miankina ity ihany izy io ary ao amin'ny kilasy famaranana.